Donald Trump dia mandefa ny Amerikana amin'ny volana indray | TeraNews.net
Donald Trump dia mandefa ny Amerikanina ho any volana indray
mpanoratra Artem Navoaka tamin'ny 13.12.2017
Gaga ny vondron'izao tontolo izao noho ny vaovao avy any Etazonia, izay nanapa-kevitra ny handefa ny mpanamory astrona ho any amin'ny zanatany zanatany indray ny filoha 45 any Etazonia. Ny alatsinainy lasa teo, ny volana desambra 11, ny filohan'ny White House dia nanao sonia baiko iray manome alàlana ny NASA hamerina amin'ny alàlan'ny fanarahan-dia Amerikana amin'ny volana.
Ny fanambaran'ny filoham-pirenena no anton'ny dingana manaraka mahakasika ny maha-marina ny fizahan-tany teo aloha, izay nitranga tamin'ny taona 1972. Na izany aza, ny resaka mifamaly amin'ny 45 taona lasa izay dia tsy naharitra hatramin'izao. Ny Amerikana dia nanizingizina fa handeha eny amin'ny volana izy ireo, fa ankoatry ny rakitsoratra sy sary miaraka amin'ny rakitsary horonantsary mivantana eo amin'ny velaran'ny astronot irery, dia tsy manana na inona na inona i Etazonia. Na tsy mandefa balafomanga avy eny ambonin'ny tany, na tsy rajain'ny fitaovam-piarahan'ny firenena hafa amin'ny sidina mankany satro-kanto iray.
Angamba, nanapa-kevitra hanaisotra ny hantsana amin'ny tantarany manokana ny Amerikana ary, nanapa-kevitra tamin'ny fomba ofisialy ny volana ho an'ny volana. Ireo manam-pahaizana dia liana tamin'ny resaka famatsiam-bola. Eny tokoa, any Etazonia, taona toy inona ny tsy fahampian'ny tetibola, ka tsy fantatra mazava hoe avy aiza ny vola an'arivony tapitrisa dolara no hanatanterahana ny asa napetraky ny filoham-pirenena.
Xiaomi Mi Air Charge Technology - misokatra ny Boxan'i Pandora
Ahoana ny fandefasana auto amin'ny Instagram - ny fitaovana mora indrindra
Hijab: inona izany, inona ny akanjon'ny vehivavy
Ny Briton dia nandatsaka vola 80 tapitrisa dolara
WEB-Camera for TV BOX: vahaolana iraisan'ny $ 20